myanmoreplus - June 23, 2022
myanmoreplus - June 17, 2022
myanmoreplus - June 16, 2022
Nay Thiha - June 9, 2022
Nay Thiha - June 3, 2022
MYANMORE+ ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ အစီအစဉ်တွေကိုတိုတိုနဲ့လိုရင်းပြောပြပေးမယ့် Weekly Letter ဖြစ်ပါတယ်။ သတိထားမိခဲ့တဲ့ဆိုင်အသစ် Hti Café ကတော့ရန်ကုန်မြို့မှာမကြာခင်ကပဲဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့ rooftop café ပါ။ Event တွေမကြာခဏလုပ်လို့ လူသိများတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ပတ်ကပဲ Sharky ရဲ့ The Wingery နဲ့ pop up event...
MYANMORE+ ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ အစီအစဉ်တွေကိုတိုတိုနဲ့လိုရင်းပြောပြပေးမယ့် Weekly Letter ဖြစ်ပါတယ်။ သွားစားဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆိုင်အသစ် ဖွင့်တာတလကျော်လောက်ပဲရှိသေးတဲ့ Lumbini Tea Room...
ပိတ်ရက်မှာမိုးအေးအေးနဲ့သည်းထိတ်ရင်ဖိုစုံထောက်ဇာတ်လမ်းလေးကြည့်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် Netflix ကဇာတ်လမ်းတွဲ ၂ခုကိုညွှန်းချင်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းတွဲ ၂ခုလုံးကပိုလန်နိုင်ငံမှာရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပြီး ဗြိတိသျှစာရေးဆရာ Harlan Coben ရဲ့ဝတ္ထု...
Fantastic Beasts saga ရဲ့ တတိယမြောက်ရုပ်ရှင်ကဒုတိယကားထက်ပိုကောင်းတယ်လို့တော့ပြောရမယ်။ ဇာတ်လမ်းကပိုသွက်တယ်၊ ရယ်ရတယ်၊ visual တွေလှတယ်။...
Sonic2ဟာတကမ္ဘာလုံးဝင်ငွေဒေါ်လာသန်း ၃၃၀ကျော်နဲ့ရုံဝင်ငွေအမြင့်ဆုံး ဗီဒီယိုဂိမ်းအခြေခံရုပ်ရှင်ဖြစ်သွားပါပြီ။ ဒါဟာသူ့အရှေ့က Sonic the Hedgehog...
Moon Knight မှာစရိုက် ၂မျိုးနဲ့ပီပီပြင်ပြင်သရုပ်ဆောင်နိုင်မှုကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းခံနေရတဲ့ Oscar Isaac အကြောင်း MM+...
၂၀၁၉ခုနှစ်က Season 1 ထွက်ပြီးသိပ်မကြာခင်မှာပဲကြည့်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ အမှန်အတိုင်းဝန်ခံရရင် poster ကိုကြည့်ပြီးစိတ်ဝင်စားလို့ကြည့်ဖြစ်သွားတာ။ ဒီ series...
(ခေါင်းစဉ်အသံထွက်ဖတ်ပြီးရေတခွက်သောက်ပါ) ဒီဇာတ်လမ်းတွဲက ဇန်နဝါရီလကုန်လောက်ကတည်းက Netflix မှာထွက်နေပေမယ့်အကြောင်းကြောင်းကြောင့် အခုမှကြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ Spoiler free ပါ။ ဇာတ်လမ်းကတော့ အဖြစ်ဆိုးတခုကြောင့်စိတ်လေနေတဲ့ Anna (Kristen Bell) ဟာတနေ့တနေ့အရက်သောက်လိုက် ပြတင်းပေါက်ကနေအိမ်နီးချင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်လိုက်နဲ့ အချိန်ကုန်နေပါတယ်။ တနေ့မှာမျက်နှာချင်းဆိုင်အိမ်ကို မုဆိုးဖို Neil (Tom Riley) နဲ့ သူ့သမီးငယ် Emma တို့ပြောင်းရွှေ့လာတယ်။ Neil...
Nay Thiha - February 19, 2022
myanmoreplus - January 29, 2022
Nay Thiha - February 18, 2021
Nay Thiha - February 16, 2021